Lacag Beenabuura oo lagu cuuryaminayo ganacsiga Muqdisho
Buluugleey December 10, 2005
Garabka Jowhar ayaa xeelad ahaan waxey soo maleegeen siyaasad dhaqaale-dumis ah oo ay ku xidido siibayaan hantileyaasha taageersan siyaasiyiinta garabka Muqdisho.
Lacag Shillin Soomaaliya oo beenabuura ayaa waxaa gacanta ku dhigay dowlada Imaaraadka, waxaana loo badinayaa in qeyb ka mida lacagtaas ay u gudubtey Soomaaliya. Ujeedada loo soo beenabuuray lacagtaas ayaa ah qorshe lagu damacsan yahay in lagu curyaamiyo dhaqalaha xoogan ee ka jira magaalda Muqdisho.
Lacagta nuucaas ah waxay qeyb ka ahayd lacago fara badan oo qandaraas ay ku siiyeen siyaasiyiinta gobolka Bari ganacsato gobolkaas u dhashay, kuwaas oo horay lacagtaas qaar ka mid ah si tuuganimo ah ku soo geliyey gobolka Bari. Waxaa la xaqiijiyey in lacagtaas qeyb ahaan ay soo gaartey magaalada Jowhar oo saldhig u ah Col. Cabdullahi Yusuf. Qorshaha ayaa ahaa in lacagtaas si toosa loo geliyo Muqdisho, oo ah xarunta uu ganacsiga ugu weyn ka socdo.
Waxaa loo maleynayaa in lacagtaas beenabuurka ah lala sugayo heshiiska lagu qabanayo Kismaayo iyo lacago deeqa oo laga sugayo dibeda. Heshiiska Kismaayo ayaa loo arkaa in lagu dejinayo dareenka kacsan ee hogaamiyayaasha Muqdishu, si taas ay u siiso garabka Jowhar fursad ay ku socodsiiyaan lacagtaas. Waxaa arrintaas barbar socota qorshe kale oo isna loo maleynayo in lagu hirgeliyo lacagtaas been abuurka ah, kaas oo ah in lacagta adag ee deeq ahaan u soo xarooneysa lagu shubo bangiyada dibeda xisaabaadka uga furan ganacsatada lacagtaas soo beenabuurtay, sarif ahaana bedelkeeda lacagtaas beenabuurkaa mushaar ahaan in loo bixiyo, taas oo loo qeybinayo labada garab.
Arrinta dambe ayaa waxaa dood balaaran ka keenay xaafiiska UNDP in lacagaha deeqda ah ee loogu tala galay in mushaar ahaan loo siiyo xubnaha dowlada waa iyaga soo marto, tuhunka badan oo jira awgiis ayaa sababay iney hakato bixinta lacagtaas. Deeqbixiyeyaasha Caalamka ayaa mar hore isku afgartay inaan lacag gacanta loo gelin garabyada kala jooga Jowhar iyo Muqdisho, waxeyna doorbideen in wixii deeqa ah loo soo marsiiyo xafiiska UNka ee u qaabilsan horumarinta.
Suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa waxaa ku xiriirsan suuqyada ganacsiga ee magaalooyinka gobollada koofureed oo idil, kuwaas oo dhaqaalahoodu ku jaan go'an yihiin ganacsiga Muqdisho. Waxayna habsami u socodka ganacsiga ku xiran yahay suuqa xorta ah ee halkaasi ka jira. Waxaa kaloo iyadana wehlisa in sarifka lacagaha qalaad uu yahay sheyga keliya ee koontaroola isbeddelka ganacsiga dalka oo dhan, kaas oo ku dheelitiran maaliyada gaarkaa ee hantileyaasha iyo dadweynaha lacagta adag dibeda looga soo diro.
Waxa keliya ee Muqdisho ay ka sameysay horumar xoogan waa ganacsiga furan ee xorta ah, kaas oo suurtageliyey in Soomaaliya ay noqoto ummad jirta iyada oo in ka badan14 sanno aysan ka jirin wax dowlada oo la aqoonsan yahay.
Waxaa la ogsoon yahay in lacag beena oo aan ka diwaan gashaneyn Bangiga Adduunka aysan lahayn wax qiima oo u dhigma wax ku bedelashadeeda. Waxa keliya oo ay lacagtaas ku fadhidaa waa qarashka ku baxay dabacaadeeda. Lacagtaas aan lahayn qiimaha waxey dhaqaalaha iskiis u dhismay ee ka jira Soomaaliya oo aysan jirin dowlad xakameysa sicir bararkeeda u keeni kartaa burbur hantiyeed oo ku yimaada ganacsatada iyo nolol xumo la soo gudboonaata dan yarta dibeda laga soo masruufo.
Lacagtaan been abuurka ah ee lagu soo daabacay dibeda ayaa ah xeelada ugu foosha xumeyd ee loo adeegsado majaxaabinta horumarka dhaqaale oo ay gaareen ganacsatada Muqdisho iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ganacsigoodu ku xiran yahay Muqdisho. Dhibaatada lacagtaas waxay qeyb ka tahay siyaasada Itoobiya ay kula dagaalamayso jiritaanka dadweynaha deggan Xamar iyada oo u adeegsaneyso garabka Jowhar.
Lacagtaan been abuurka ah hadii aysan ka gaashaaman dadweynaha Soomaaliyeed ee degan Xamar waxay halis u tahay jiritaanka dhaqaale ee ka jira koonfurta Sooamaaliya.